Ny razana kosa efa simba tanteraka. Ny sabotsy lasa teo vao hita lavitra ny tanàna ny razana. Tao amin’ny kaominina Bekoratsaka, distrikan’i Mampikony, farita Sofia, no nitrangan’ny famonoana, ny talata lasa teo. Voalaza fa namonjy ny asa andavanandro ity raim-pianakaviana ity, ny talata maraina. Ny alin’iny anefa tsy nody tao an-trano izy, ka nanaitra ny havany sy ireo vady aman-janany ary nanao ny fikarohana izy ireo. Nampandre ny mpitandro ny filaminana koa ireo vady aman-janany ary rehefa natao ny fikarohana ny alin’iny, dia izao hita ny sabotsy teo izao ny razana izay efa simba sy namofona. Nanokatra ny fanadihadiana ny zandary any an-toerana. Marihina fa fanindroany izao no nisy vono olona mahatsiravina tahaka izao, tao amin’ity distrika ity. Voalohany, tovolahy kely mpiandry omby no maty notetitetehina ary lasan’ireo mpamono ny omby 18 nandrasany dia ity niseho tao amin’ny kaominina Bekoratsaka ity ny fanindroany. Andrasana ny valin’ny fanadihadiana ataon’ny mpitandro ny filaminana.